Readdle wuxuu bilaabay PDF Khabiir 7 wuxuuna ka koobanyahay PRO Subscription | Wararka IPhone
Readdle wuxuu bilaabayaa PDF Expert 7 waxaana kujira rukunka PRO
Our qalabyada waa kordhinta nolosheena. Waxaan u adeegsanaa inay naga caawiyaan nolol maalmeedkeena: shaqada, jaamacadda, guriga ... feylasha iyo dukumiintiyada ayaa lagama maarmaan u ah la tacaalidda dhammaan macluumaadka. Dukaanka App-ka waxaa ku yaal codsiyo badan oo lagu maareeyo dhammaantood, laakiin haddii uu jiro mid ka dhex muuqda inta kale xagga dokumentiyada PDF, waa Khabiirka PDF ee Readdle. Maalmo ka hor ayaa la bilaabay Khabiirka PDF oo leh astaamo badan oo cusub, oo ay ku jiraan soo saarista nooc PRO ah oo leh hawlo ku wajahan xirfad-yaqaan. Boodka ka dib waxaan falanqeyneynaa labada qaab ee barnaamijku hadda ku haysto cusbooneysiintan weyn.
Maxaa ku cusub PDF Khabiir 7
Naqshadda cusub ee loo yaqaan 'minimalist design' ayaa ah waxa ugu horreeya ee aad ogaan doontid markii aad furaysid Khabiirka PDF-ka ah 7. Waxaan barannay faallooyin fara badan waxaanan sifeynay faahfaahin kasta si aan uga caawino barnaamijka inuu ka sii iftiimo xitaa shaqada iyo dugsiga. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad diirada saarto shaqadaada adigoon mashquulin oo waa mid dareen leh waxaad ku ogaan doontaa adigoo jaleecaya.
Readdle ayaa sii daayay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan qalabkeeda Khabiirka PDF. Warku waa badan yahay, mid ka mid ah kuwa ugu horreeya qaabkeeda cusub ee minimalist, sida aad ka aqrisan karto qoraalka ka soo baxay warsaxaafadeedka. Sidoo kale, dalabku wuxuu la socdaa Birta, interface barnaamijka Apple, taas oo ka dhigaysa dhakhso badan: "Waxaad furi doontaa buug ka kooban 1000 bog oo iskaanka ah waqti aan dheereyn!" Dhinaca kale, waxaan u qaabeyn karnaa arjiga sida aan u jecel nahay abuurista xirmo qalab ah in aan si joogto ah u isticmaalno. Sidan oo kale waxaan ku abuuri doonnaa meel gaar ah oo aan ku dareemeyno aqoon, annaga oo aan ku wareersaneyn dhammaan qalabka aan gacanta ku heyno markasta.
Horumar kale ayaa sidoo kale lagu soo daray sida isdhexgalka barnaamijka ee faylasha iOS, kudarista raadin horumarsan iyo qalab kooban oo sharaxaad kooban ah. Hawlahaas wixii ka baxsan, Readdle wuxuu go'aansaday inuu siiyo PDF Khabiir 7 'guntin' howlaha PRO:
U beddel dukumiintiyada PDF
Isku xirnaanta macaamiisha
Tafatir oo ku dar sawirada iyo xiriiriyeyaasha
Hawlahan PRO waxaa laga helaa barnaamijka dhexdiisa markii aan soo dejisanno. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo in haddii PDF Khabiirka 6 aad iibsatay ikhtiyaarka ah inaad wax ka beddesho PDF oo aad ku darto xiriiro iyo sawirro dukumiintiyadaada uma baahnid inaad iibsato astaamaha PRO, halkii, iibsiyada ka yimid qaabkii hore ayaa dib loo soo celiyey. Dabcan, howlaha intiisa kale waa la mamnuuci doonaa.
Khabiirka PDF: abuur oo saxo PDFfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Readdle wuxuu bilaabayaa PDF Expert 7 waxaana kujira rukunka PRO
Apple Music waxay bilaabaysaa inay dib u cusbooneysiiso buuggeeda 'Digital Masters' cusub
Sonos wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo saaro afhayeen la qaadan karo oo leh Bluetooth iyo AirPlay 2